HUAWEI MateView - HUAWEI Myanmar
ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ နေ့စဉ်သုံးစွဲမှု အတွေ့အကြုံ ပေးစွမ်းနိုင်မယ့်
HUAWEI MateView ၊ သေသပ်လှပပါးလွှာပြီး 4K+ FullView dispaly
ရုပ်ထွက်ရရှိနိုင်မည့် အပြင် Devices အများအပြားနှင့် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်
MateView ၏ စမတ်ကျကျ ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုလေ့လာရန်
ကြည်လင်တောက်ပရွှန်းစိုသည့်ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးကို လက်တွေ့ ပြင်ပလောကတွင် မြင်တွေ့နေရသည့်အလား ကြည့်ရှုခံစားနိုင်
ပိုမိုလွယ်ကူသော တုံ့ပြန်မှုများပြုလုပ်နိုင်စေမည့် တိကျကောင်းမွန်သည့် ထိတွေ့ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
ကြိုးမဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်စွမ်းက နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုအဆင့်မြင့်မြင့်ခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းခွင်နေရာတိုင်းအတွက် လှပသေသပ်စွာ အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေမည့် ဒီဇိုင်းပုံစံ
အံ့သြမှင်သက်ဖွယ် အသေးစိတ်ကအစကို HUAWEI MateView ရဲ့ 4K+ Ultra-HD display ပေါ်မှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါပြီ။ သမရိုးကျ 4K ရုပ်ထွက် ထပ် pixels ပေါင်း ၁သန်းခွဲကျော်ပိုမိုသည့်ရုပ်ထွက်ကို ၂၈.၂ လက်မ မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ကြည်တောက်ရှင်း ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးကို နေ့စဉ်ကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ screen-to-body ratio4 ၉၄% ထိရှိပြီး 6mm အထိ သေးငယ်သည့် ဘောင်များဖြင့် ထိန်းကွပ်ထားမှုက အံ့အားသင့်ဖွယ် မြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံကို ခံစားရရှိစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
98% DCI-P3 cinema-level colour gamut အဆင့်ရှိ အရောင်ထွက်အရည်အသွေးကြောင့်၊ ဒီဇိုင်း၊ ဓာတ်ပုံပြုပြင်ခြင်း စသည့် ဖန်တီးမှု project များအတွက် စိတ်ကျေနပ်ဖွယ် ရုပ်ထွက် အရောင်အရည်အသွေးကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါသည်။ ∆E <2standard colour accuracy ပေးစွမ်းနိုင်မှုကလည်း HUAWEI MateView ပေါ်တွင် လက်တွေ့ဘဝနှင့် အနီးစပ်ဆုံးအရောင်ထွက်ကို ခံစားရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်
၁.၀၇ ဘီလီယျံ ရှိသော အရောင်များကို ကြွယ်ဝရွှန်းစို၊ ပိုမိုတောက်ပစွာ မြင်တွေ့ခံစားစေနိုင်မည့် အပြင် အရောင်အကူးအပြောင်းများတွင်လည်း ချောမွေ့သေသပ်လှပစွာ ကြည့်ရှုခံစားစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျယ်ပြန့်ရွှန်းစိုပြီး အရောင်လှိုင်းများ မရှိသည့် ရုပ်ထွက်များကို စီးမျောခံစား ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
မတူ ကွဲပြားခြင်း၏ အနှစ်သာရကို ခံစားလိုက်ပါ။
စိုပြေတောက်ပတဲ့ အရောင်အနုအရင့် များကို ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသွေးလက္ခဏာများနဲ့ ခံစားကြည့်ရှုနိုင်စေမယ့် HUAWEI MateView ဟာ VESA DisplayHDRTM 400-certified display အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကြည်လင်ရွှန်းစိုပြီး အများဆုံး 5000-nits အထိ ခံစားရရှိစေမှာဖြစ်ပြီး အသေးစိပ်တစ်ခုချင်းစီကို8 တစ်ခုချင်း တစ်ခုချင်းစီ စက္ခုအာရုံပေါ်မှာ ပဒါဿဖြစ်ဖွယ် ခံစားနိုင်စေမှာပါ။
HUAWEI MateView ဟာ 3:2 aspect ratio ဖြင့် ကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင် ပုံမှန် 16:99 Ratio များထပ် ဒေါင်လိုက်မှာ ၁၈.၅% ခန့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ပြသနိုင်စွမ်း ရှိပါတယ်။ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ Document များကို ကြည့်ရှုနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဗီဒီယိုများနှင့် သီချင်းများကို တည်းဖြတ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှာ Scroll ပြုလုပ်ရတာကို သက်သာစေပြီး ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ကြည့်ရှုအသုံးပြုစေနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ TUV Rheinland-certified Low Blue Light and Flicker-Free display အမျိုးအစားဖြစ်တာကြောင့်လည်း ကိုယ့်ရဲ့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ စက္ခုအာရုံ ထိခိုက်မှုကလည်း ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
3:2 aspect ratio ရှိသော Mate
မိသားစုဝင် Devices များကိုပိုမိုလေ့လာရန်
MateView ရဲ့ အောက်ခြေကို ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်း12 နဲ့ ထိရုံနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်းကို မြင်ကွင်းကျယ်မှာ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါပြီ။ Desktop Mode13 ကလည်း ကိုယ့်ရဲ့ ဖုန်း Home Screen ကို Deskotp ပုံစံအတိုင်း မြင်ရစေမှာဖြစ်ပြီး Apps တွေ၊ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ပြုပြင်ဖန်တီးတာတွေ စတာတွေကို keyboard၊ Mouse စတာတွေနဲ့ အသုံးပြုပြီး ဖုန်း14ထဲကို ပြန်လည် သိမ်းဆည်းစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
HUAWEI MateView ကို ကိုယ့်ရဲ့ Laptop16 နဲ့ ကြိုးမဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး Full HD ရုပ်ထွက်အရည်အသွေးကို Latency နည်းနည်း၊ Data အကူးအပြောင်းမြန်ဆန်ပြီး နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိပဲ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမျှမကပဲ ကိုယ့်ရဲ့ tablet နဲ့ MateViewကို ချိတ်ဆက်အသုံးပြုပြီး ဒီဇိုင်းပရောဂျက်တွေမှာ Sketchpad အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်စေမှာပါ။ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေပြီး မြင်ကွင်းကျယ်ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်လိုက်ပါ။
စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်တဲ့ Matebook 16 အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန် >
စစ်မှန်စွာ ရွေ့လျားနေတဲ့ ပုံရိပ်များ
ဖုန်းပေါ်မှာ ဗီဒီယိုတွေ ကြည့်ရှုရတာကို နှစ်သက်ပါသလား ? ဖုန်းပေါ်က ဗီဒီယိုတွေကို စူပါမြင်ကွင်းကျယ် MateView ပေါ်မှာ အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက်ပြီး ရွှေ့ပြောင်း ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ HD17 အရည်အသွေးနဲ့ ကြည့်ရှုပြီး dual-speaker surround sound အသံထွက်နဲ့ ကြည့်ရှုခံစားလိုက်ပါ။
Huawei Video တွင် TV shows များကို ကြည့်ရှုရန် အသေးစိတ်ကိုလေ့လာရန် >
ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်သည့် USB-C Port က ချိတ်ဆက်မှုများကို ပိုမိုအားကောင်း သန်မာစေပြီး၊ Audio နဲ့ Video ကိရိယာ ပေါင်းစုံနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖိုင်များကို လျင်မြန်လွယ်ကူစွာ ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သည့် အပြင် လျင်မြန်စွာ အားပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပေးနိုင်မယ့် reverse charging ကိုလည်း အထောက်အပံ့ပေးစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
Matebook 16 နှင့် MateView ကို USB=C နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန် >
ကိုယ့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုပုံစံကို ပြောင်းလဲလိုက်ပါ
နည်းပညာရဲ့တိုးတက်လာမှုကို လက်ဖျားထိပ်မှာ ထိတွေ့လိုက်ပါ။ MateView ရဲ့ Smart Bar ကိုအသာအယာ ထိတွေ့ပြီး ဖန်ရှင် နဲ့ စက်တင်များကို အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခလုတ်ကင်းမဲ့ပြီး ပွတ်ဆွဲ၊ ထိတွေ့ခြင်းဖြင့် ခေတ်မှီဆန်းပြားတိုးတက်တဲ့ နည်းပညာ ကို ခံစားလိုက်ပါ။
Display Input ကိုလွယ်ကူစွာပြောင်းလဲလိုက်ပါ
MateView ပေါ်တွင် Smart Bar ကို အသုံးပြုပြီး Display Input19များကို လွယ်လင့်တကူပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ Laptop နှင့် ပုံတူကူးဖော်ပြထားသော Display ၊ Phone Display အစရှိသဖြင့် အလွယ်တကူ ပြောင်းလဲစေနိုင်မှာပါ။
အံဝင်ခွင်ကျ တစ်သားတည်းဖြစ်အောင် ပြုလုပ်လိုက်ပါ
Minimalist design concept ကို အနုပညာနှင့်နည်းပညာတိုးတက်မှုတို့ လျောယှက်ပြီး HUAWEI MateView ကို တည်ဆောက်ထားပါတယ်။ အဆင့်အတန်းမြင့် အလျူမီနီယံအလွိုင်းကို အသုံးပြုထားပြီး ဘေးဘောင်များမှာလည်း အနုစိပ်လှပသေသပ်ပြီး မျက်စိပဒါသဖြစ်ဖွယ်၊ ပါးလွှာသေသပ်ပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့် ပစ္စည်းတစ်ခုဟု မြင်ရုံနှင့် ခံစားမိစေရန် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါသည်။
အနုစိတ် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားမှု အနုပညာ
လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့ HUAWEI MateView ကို အလွယ်တကူရွေ့ပြောင်းနိုင်သလို၊ အနိမ့်အမြင့်ချိန်ညှိခြင်းကိုလည်း စိတ်တိုင်းကျ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ Screen နှင့် Stand အကြားကို အကြမ်းခံပြီး အနုစိပ်ပုံဖော်ထားတဲ့ စတိန်းလက်စတီးလ် ပတ္တာကို တပ်ဆင်ပေးထားလို့ အနိမ့်အမြင့်ချိန်ညှိခြင်းကို ကိုယ့်ရဲ့ လက်ဖျားလေး20 နဲ့ လွယ်လင့်တကူ ပြုလုပ်နိုင်စေမှာပါ။
နားစွင့်ရင်း အေးဆေးပဲ စကားပြောလိုက်ပါ။
Stand မှာတပ်ဆင်ထားတဲ့ dual-speaker system ကနေတစ်ဆင့် ကိုယ့်ရဲ့ အကြားအာရုံကို နှိုးဆွလိုက်ပါ။ အားကောင်းတဲ့ amplifier ကိုတပ်ဆင်ထားပြီး ကြည်လင်းပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့ bass အသံထွက်ကို ခံစားနားဆင်စေနိုင်မှာပါ။ microphone ၂ခုကိုလည်း ထည့်သွင်းတပ်ဆင်ပေးထားပြီး ပတ်ဝန်းကျင် ဆူညံသံများ ဖမ်းယူမှုကို လျှော့ချပေးပြီး ကိုယ့်ရဲ့ အသံကို တစ်ဖက်လူက အသံမကြားတချက် ကြားတချက်ဖြစ်စေတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုးကို ခံစားမိစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။
4-meter far-field voice pickup21
ဘက်စုံအသုံးပြုစေနိုင်ဖို့ ရွေးချယ်စရာ စုံလင်တဲ့ Ports များ ပါဝင်မှု
ရိုးရှင်းသေသပ်လှပသော ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ဘက်စုံအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်လျက် Stand ၏ ဘေးဘက်နှင့် နောက်ကျောတွင် Ports များ စုံစုံလင်လင် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။ Power အရင်းအမြစ်အတွက် USB-C တစ်ပေါက်၊ နောက်ထပ် USB-C တစ်ပေါက်၊ USB-A ၂ပေါက် နှင့် MiniDP interface တို့ ထည့်တွင်းတည်ဆောက်ထားပါတယ်။
HUAWEI MateView GT professional gaming monitor ကို အသေးစိတ်လေ့လာနိုင်ပါတယ် >
Wireless·Real Colour Monitor ဆိုသည်မှာ Wireless Projection နှင့် real colour display နှစ်ခုလုံးကို အထောက်အပံ့ပေးသော မော်နီတာ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက 98% DCI-P3 colour gamut နှင့် ΔE <2colour accuracy တို့ကို ရရှိစေမှာဖြစ်သည်။
4K+ ၏ Resolution မှ 3840 × 2560 ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် 4K Resolution မှာ 3840 × 2160 သာဖြစ်သည်။
Wireless version အမျိုးအစား ဖြစ်သော (HSN-CBA) တွင်သာ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိသော အချက်အလက်ဖြစ်ပါသည်။ Screen ပေါ်ရှိ ရုပ်ထွက်မြင်ရသော ဧရိယာနှင့် အဆိုပါ ဧရိယာ + ဘေးဘောင် ဧရိယာတို့ကို နှိုင်းယှဉ်တွက်ချက်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပြီး လက်တွေ့ screen-to-body ration နှင့် အနည်းငယ် ကွဲလွဲမှုရှိနိုင်ပါသည်။
100% sRGB colour gamut ကို လွှမ်းခြူံနိုင်သော ဂိန်းဂဏာန်းပေါ်မူတည် ရရှိလာသော တန်ဖိုးဖြစ်ပါသည်။ Colour gamut settings ကို monitor settings menu တွင် ချိန်ညှိနိုင်ပါသည်။
ΔE<2 သည် DCI-P3 color gamut ၏ ပျမ်းမျှ အရောင်ထွက် တန်ဖိုးကို ဖော်ပြပြီး၊ ΔE<1 သည် sRGB color gamut ၏ ပျမ်းမျှ အရောင်ထွက် တန်ဖိုးကို ဖော်ပြပါသည်။ Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိသော အချက်အလက်များဖြစ်ပြီး လက်တွေ့အရောင်ထွက်နှုန်းသည် Screen အသုံးပြုချိန် ကြာမြင့်မှုနှင့် စမ်းသပ်သည့် နည်းစနစ်ပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲလွဲမှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။
Screen ၏ Color Depth မှာ 10 bits ဖြစ်သည်။
Huawei ဓာတ်ခွဲခန်းမှ ရရှိသော အချက်အလက်များ ဖြစ်သည်။ 4K+ resolution နှင့် 4K resolution pixel data များ နှိုင်းယှဉ်ထားသော ရလဒ်များ ဖြစ်သည်။
HUAWEI Mateview သည် TÜV Rheinland Low Bluelight နှင့် Flicker Free certification ရရှိထားပါသည်။ Eye Comfort mode ကို ဖွင့်လိုက်သောအခါ အပြာရောင်အလင်းတန်းများ မျက်ထိထဲဝင်ရောက်မှုကို လျှော့ချပေးသည့် ÜV Rheinland low blue light tests ကို စစ်ဆေး အောင်မြင်ထားပါသည်။ ထုတ်ကုန်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အသုံးချမှုအတွက် မဟုတ်ပါ။ လှိုင်းအလျားနှင့် စွမ်းအင်လျော့ချထားသော ကြိမ်နှုန်းများပေါ်မူတည်ပြီး အပြာရောင် အလင်းတန်း Source သည် ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
Screen သည် မှိတ်တုပ်မှိတ်တုပ်ဖြစ်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် DC dimming mode ပါဝင်ပါသည်။
NFC ဖန်ရှင်ပါဝင်ပြီး EMUI 10.0 နှင့် အထက် Huawei စမတ်ဖုန်းများနှင့်သာ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ အသေးစိတ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် Customer Service သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ Screen projection လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် Huawei ဖုန်းကို MateView ၏ Base အောက်ခြေရှိ Huawei Share Sensor တပ်ဆင်ထားသော နေရာနှင့် ထိပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
Kirin 980 နှင့် အထက် အသုံးပြုထားသော EMUI 12.0 နှင့် အထက် Huawei Phone များနှင့်သာ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။ အသေးစိတ် ဆက်သွယ်မေးမြန်းရန် Customer Service သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
အချို့ Application များသာ တွဲဖက်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း ရှိပါသည်။
Wireless version အမျိုးအစား ဖြစ်သော (HSN-CBA) တွင်သာ ရရှိမည်ဖြစ်ပြီး Wireless projection ကို အထောက်အပံ့ပေးသည့် မည်သည့် ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ လပ်တော့ အမျိုးအစားများနှင့် ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ မော်ဒယ်အလိုက် ထုတ်ကုန် ဝန်ဆောင်မှု Website များတွင် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် Huawei Customer Service သို့ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Wireless Projection ဖြင့် ချိတ်ဆက်မည့် Laptop သည် Miracast wireless projection protocol ကို အထောက်အပံ့ပေးရမည် ဖြစ်သည်။
Input Source ၏ Resolution ပေါ်မူတည်ပြီး Video Projection ၏ resolution ပြောင်းလဲနိုင်ခြေရှိပါသည်။
One-Cable Connection ကိုသာထောက်ပံ့ပေးသည်။ USB-C host သည် ရုပ်ထွက် (DP Alt Mode), PD charging protocol နှင့် data transmission (USB protocol) တို့ကို ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်သည်။ USB-C ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုကို ထောက်ပံ့သော Model များမှာ MateBook X Pro series, MateBook 14 series, MateBook X 2020 or above, MateBook 13 2020 or above, and MateBook 16 တို့ဖြစ်သည်။ Huawei Customer Service သို့ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
65 W သည် အမြင့်ဆုံးရရှိနိုင်စေမည့် charging power ဖြစ်သည်။ ပြင်ပ အပူချိန်နှင့် သုံးစွဲမှုအပေါ်မူတည်ပြီး အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။ USB-C device များအကြား အားသွင်းမှုအတွက်သာ အထောက်အကူ ပြုမည်ဖြစ်သည်။
USB-C ချိတ်ဆက်ထားမှု နှင့် ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်ထားမှုများအကြား ပြောင်းလဲခြင်းကိုသာ အထောက်အကူပြုမည်ဖြစ်သည်။ Display input ရွှေ့ပြောင်းသည်နှင့် အမျှ Mouse Control နှင့် Keyboard control များ လိုက်လံပြောင်းလဲမည်ဖြစ်သည်။ MateView အတွက် အသုံးပြုထားသည့် Keyboard နှင့် Mouse သည် ကြိုးမဲ့ ချိတ်ဆက်ထားသော Laptop အတွက် ထိန်းချုပ်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
Screen ၏ အလယ်နှင့် အောက်ခြေကို လက်ညိူးတစ်ချောင်းတည်းနှင့် ဖိပြီး ထောင့်အနေအထားကို နှိမ်ံချနိုင်ပြီး Screen ၏ ထိပ်ပိုင်းအလယ် ကို လက်ညိုးနှင့်ဖိပြီး ထောင့်အနေအထားကို တိုးမြှင့်နိုင်သည်။ အားစိုက်ထုတ် ထိုးထည့်လိုက်သော လက်ချောင်း၏ အားပမာဏမှာ တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတူညီနိုင်ကြောင်း သတိချပ်သင့်ပါသည်။
Huawei Labs မှ ရရှိထားသော အချက်အလက်များ ဖြစ်ပါသည်။ .
USB-C-to-USB-C နှင့် MiniDP-to-DP cables များမှာစံသတ်မှတ်ချက်အနေနှင့် ပါဝင်ပါသည်။ Display Effect တွင် ဖော်ပြထားသော ၁.၀၇ဘီလီယံကာလာမှာ USB-C (သို့မဟုတ်) MiniDP အသုံးပြုပြီးရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ HDMI 2.0 ၏ သီအိုရီအရတွက်ချက်မှုများမှ ထွက်ပေါ်လာသော Bandwidth အကန့်အသက်များကြောင့် HDMI 2.0 Port ၏ Resolution နှင့် Refresh rate မှာ 3840 x 2560@50 Hz အထိသာ အမြင့်ဆုံး ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ MiniDP နှင့် USB-C Interfaces များကိုသာ အသုံးပြုရန် ထောက်ခံချက်ပေးလိုပါသည်။